Ogaden News Agency (ONA) – Warbixin Ay Amnesty International Kasoo Diyaarisay Burundi.
Warbixin Ay Amnesty International Kasoo Diyaarisay Burundi.
Ciidamada Nabad-sugida Burundi, ayaa si xeeladeysan u dilay tobaneeyo ruux intii ay socdeen cadaadiskii rabshadaha ee ka dhacay 11 desember magaalada xarunta ah ee Bujumbura, sida ay hey’adda xuquuqda aadanaha dooda ee Amnesty sheegtay.
Waxay hay’adu sheegtay in qaar kamid ah dadkii ku dhintay rabshadaha hal maalin oo kaliya loo dilay si xukunka ka baxsan. Ugu yaraan 87 ruux oo sideed kamid ah dadkaasi ahaayeen ciidamada ammaanka, ayaa la dilay.
Dawladda Burundi wali kama jawaabin warbixinta Amnesty. Balse waxay sheegtay waxyar kaddib rabshadihii 11-kii desember kuwii lagu dilay ineey ahaayeen kuwii weeraray xarrumaha dawladda.
Rabshadaha, ayaa burburiyay Burundi ilaa afgambigii May iyo dibadbaxyadii la xidhiidhay inuu xukunka siijoogo madaxwayne Pierre Nkurunziza. Dagaalka u dhexeeya Hutuga iyo Tutsiga oo Burundi ka bilowday horraantii 1990-kii, ayey ku dhinteen dad lagu qiyaasay 300,000.
Amnesty, ayaa sheegtay in warbixinteeda ay ka kooban tahay hawl labo toddobaad oo xaqiiqo raadis ahayd oo wadanka laga sameeyay. Badi dadkii ku dhintay 11-kii desember, ayaa ahaa dad deganaa degmooyinka badi ay deganaayen xubno ka tirsan Tutsiga laga tirada badan yahay.